Aiva Nebarika Asi Ava Murume Kwaye | Bhaibheri Rinochinja Upenyu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Korean Lingala Lithuanian Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
CHII chakaita kuti mumwe murume aiva nebarika uye aishora Zvapupu zvaJehovha apedzisire ava Chapupu? Chii chakaita kuti mumwe mufundisi wechechi dzomweya apedzisire achinja zvaaitenda? Chii chakabatsira mumwe mukadzi aibatwa zvisina kunaka nevabereki vake paaikura kuti akwanise kukurira pfungwa yokuzvisema uye kuti aswedere pedyo naMwari? Chii chakaita kuti mumwe murume aifarira mumhanzi une mutinhimira une ruzha unonzi heavy-metal apedzisire ava mumwe weZvapupu zvaJehovha? Verenga nyaya idzi uzvinzwire.
“Ndava murume kwaye.”​—RIGOBERT HOUETO
NHOROONDO YOUPENYU: AIVA NEBARIKA UYE AISHORA ZVAPUPU ZVAJEHOVHA
Ndinobva kuguta rakakura rinonzi Cotonou kuBenin. Ndakakura ndichipinda chechi yeRoma asi ndaingoendawo zveapo neapo. Varume vakawanda vekwandaigara vaipinda Roma vaiva nebarika sezvo zvaibvumirwa nomutemo kareko. Saka ndakapedzisira ndava nemadzimai mana.
Muma1970, vanhu vakatanga kuda kupidigura hurumende yaitonga muBenin. Ndakatsigira chaizvo kurwisana uku ndichibva ndatanga kuita zvematongerwo enyika, ndichifunga kuti izvi zvaizobatsira vanhu vomunyika yedu. Vanhu vairwisa hurumende vakanga vasingafariri Zvapupu zvaJehovha nokuti zvakanga zvisina divi razvaitsigira. Ndaiva mumwe wevaya vakatambudza Zvapupu. Pakadzingwa mamishinari eZvapupu muBenin muna 1976, ndaifunga kuti haazofi akadzoka.
Kurwisana uku kwakazopera muna 1990. Ndakashamiswa kuona mamishinari eZvapupu achidzokazve muBenin nokukurumidza. Ndakatanga kufunga kuti pamwe zviri kuitwa nevanhu ava zvina Mwari mukati. Panguva iyoyo ndakachinja kwandaishandira. Mumwe murume wandaishanda naye aiva Chapupu saka akabva atotanga kundiparidzira. Akandiratidza magwaro eBhaibheri anotaura nezvaJehovha saMwari ane rudo uye anoda zvakarurama. (Dheuteronomio 32:4; 1 Johani 4:8) Pandakaziva kuti Jehovha ndiMwari ane unhu hwakadaro, zvakandibaya mwoyo zvikabva zvaita kuti ndide kudzidza zvakawanda nezvake, saka ndakabvuma kudzidza Bhaibheri.
Ndakabva ndatotanga kupinda misangano yeZvapupu zvaJehovha. Ndakabayiwa mwoyo norudo rwandakaona, pakanga pasina zvokusarurana zvichinzi varombo kwavo, vemari kwavo, kana kuti verudzi urwu kwavo vega. Pandairamba ndichiwadzana neZvapupu, zvakarambawo zvichindijekera kuti vanhu ava ndivo vateveri vaJesu vechokwadi.​—Johani 13:35.
Ndakaona kuti ndaitofanira kusiya chechi yeRoma kuitira kuti ndishumire Jehovha. Izvozvo zvakanga zvisiri nyore nokuti ndaitya zvaizotaurwa nevanhu. Kwapera nguva yakareba ndakabatsirwa naJehovha ndikabva ndazokoka chivindi ndokusiya chechi yeRoma.
Paivawo nechimwe chinhu chikuru chandaifanira kuita. Pakudzidza kwandakaita Bhaibheri ndakaona kuti Mwari haabvumiri barika. (Genesisi 2:18-24; Mateu 19:4-6) Kuna Mwari, mudzimai wangu wokutanga ndiye chete wandaifanira kugara naye. Saka ndakabva ndanyoresa muchato wedu zviri pamutemo vamwe vatatu vachibva vaenda, asi ndakaronga kuti vawane chaizovararamisa. Nokufamba kwenguva vamwe vacho vaviri vakazova Zvapupu zvaJehovha.
Mudzimai wangu haashori chisarudzo changu chokunamata Jehovha kunyange zvazvo iye achiri kupinda Roma. Ndava kunyatsoona kuti ndava murume kwaye uye mudzimai wangu ndizvo zvaanotaurawo.
Ndaifunga kuti kuita zvematongerwo enyika kuchaita kuti ndivandudze upenyu hwevanhu vekwandinogara asi ndakazoona kuti kwaiva kudzingana nemhepo. Iye zvino ndava kuziva kuti Umambo hwaMwari ndihwo chete huchagadzirisa matambudziko evanhu. (Mateu 6:9, 10) Ndinoonga Jehovha nokundiratidza kwaakaita kuti ndingararama sei upenyu hunonyatsofadza.
“Kuchinja mararamiro angu kwaisava nyore.”​—ALEX LEMOS SILVA
GORE ROKUBEREKWA: 1977
NHOROONDO YOUPENYU: MUFUNDISI WECHECHI DZOMWEYA
Ndakakurira nechokunze kweguta rinonzi Itu, muSão Paulo State. Nzvimbo iyi yaizivikanwa nokuparwa kwemhosva kwakanyanya.
Ndaigara ndichingorwa uye ndichiita unzenza. Ndaiitawo zvokutenga nokutengesa zvisiri pamutemo zvinhu zvinodhaka. Ndakazoona kuti izvi zvaigona kundiendesa kujeri kana kuti kwamupfiganebwe, saka ndakasiyana nazvo. Ndakatanga kupinda imwe chechi yemweya ndikazoguma ndava mufundisi.
Ndaifunga kuti kuva mufundisi kwaizonyatsondipa mukana wokubatsira vanhu. Pane zvidzidzo zveBhaibheri zvandaitepfenyura pachiteshi cheredhiyo chekwandaigara uye ndakapedzisira ndava kuzivikanwa chaizvo. Nokufamba kwenguva ndakazoona kuti vanhu vomuchechi iyi vakanga vasina hanya nevavainamata navo, kunyange zvokukudza Mwari zvakanga zviri kure navo. Ndaiona sokuti basa rechechi iyi raiva rokutsvaka mari chete. Ndakasarudza kusiya chechi iyi.
Pandakatanga kudzidza Bhaibheri, hazvina kunditorera nguva ndisati ndaona kuti Zvapupu zvaJehovha zvakasiyana nezvimwe zvitendero. Pane zvinhu zviviri zvandakada pavari. Chokutanga, Zvapupu zvaJehovha hazvingogumiri pakuparidza kuti vanhu vade Mwari nevavakidzani vavo asi zvinotoratidza rudo rwacho. Chechipiri, havapindiri mune zvematongerwo enyika kana kuti muhondo. (Isaya 2:4) Zvinhu zviviri izvi zvakaita kuti ndive nechokwadi chokuti ndakanga ndawana chitendero chechokwadi, chinofananidzirwa nemugwagwa wakatetepa unoenda kuupenyu husingaperi.​—Mateu 7:13, 14.
Ndakaona kuti pane zvinhu zvikuru zvandaitofanira kuchinja kuti ndifadze Mwari. Ndaifanira kunyanya kupedza nguva ndiine mhuri yangu uye kuva munhu anozvininipisa chaizvo. Kuchinja mararamiro angu kwaisava nyore, asi Jehovha akandibatsira ndichibva ndabudirira. Mudzimai wangu akafadzwa nokuchinja kwandakaita. Akanga anditangira kudzidza Bhaibheri asi panguva iyi akatanga kuita zvaakanga ari kudzidza. Takabva tasarudza kuti taida kuva Zvapupu zvaJehovha. Takabhabhatidzwa zuva rimwe chete.
Ini nomudzimai wangu tinofara kuti tiri kubatsira vana vedu vatatu kuti vave noushamwari hwepedyo naJehovha. Mumhuri medu mune mufaro. Ndinoonga Jehovha nokundibatsira kwaakaita kuti ndizive chokwadi chiri muShoko rake Bhaibheri. Chokwadi chiri muBhaibheri chinochinja upenyu hwevanhu. Kuchinja kwandakaita uku iBhaibheri.
“Ndava kunzwawo kuti ndava munhu uye hana yangu haichanditongesi.”​—VICTORIA TONG
NHOROONDO YOUPENYU: KUSHUNGURUDZWA ACHIRI MUDIKI
Ndakakurira muNewcastle, kuNew South Wales. Mumhuri medu takaberekwa tiri vanomwe, ini ndiri dangwe. Baba vangu vaiva munhu wezvibhakera uye chidhakwa, amaiwo vaida zvokurwa. Amai vangu vaindishungurudza nokundirova uye kundituka. Vaigara vachindiudza kuti ndiri munhu akaipa uye ndichanotsva kudenga. Izvi zvaiita kuti nditye zvikuru.
Kazhinji ndaipedzisira ndarovha chikoro nokukuvara kwandinenge ndaita ndarohwa naamai vangu. Munyika yedu kana vabereki vachishungurudza vana vanovatorerwa nevemutemo. Saka pandakanga ndava nemakore 11, ndakatorwa ndikaendeswa kuchikoro chehurumende, ndokuzoendeswa kuchikoro chechechi. Ndava nemakore 14, ndakatiza pachikoro ichi. Ndakanga ndisingadi kudzokera kumba, saka ndakatanga kugara mumigwagwa iri muKings Cross, nzvimbo iri muguta reSydney.
Pandaigara mumigwagwa, ndakatanga kushandisa zvinodhaka, kuraradza, kuona zvinonyadzisira, uye kuita zvechipfambi. Zvakaitika rimwe zuva zvakandityisa. Ndaigara pane imwe imba yaiva nenhurikidzwa yemumwe murume aiva nebhawa. Rimwe zuva ari manheru vamwe varume vaviri vakauya vachida kuzomuona. Akanditi ndiende muimba yokurara ndokusara achikurukura nevarume vaya vaviri, asi ndainzwa zvavaitaura. Murume uyu aironga kunditengesa kuvarume ava. Vaizondihwandisa muchikepe chinotakura zvinhu vondiendesa kuJapan kuti ndinoshanda mubhawa. Ndakarohwa nehana, ndikabva ndasvetuka nepavharanda repadenga ndokutiza ndichitsvaga rubatsiro.
Ndakasangana nemumwe murume akanga ashanyira guta reSydney, ndokubva ndamutsanangurira dambudziko rangu ndichifunga kuti achandipa mari. Panzvimbo pokundipa mari, akanditi tiende kumba kwaaigara kuti ndinogeza uye ndiwane zvokudya. Takatozopedzisira tadanana. Kwapera gore takabva taroorana.
Pandakatanga kudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha, ndakagumbuka pandakadzidza kuti Satani ndiye honzeri yezvakaipa; nokuti ndakanga ndangokura ndichidzidziswa kuti Mwari ndiye anoita kuti titambure. Zvakandizorodza pandakadzidza kuti Mwari haapisi vanhu kudenga, zviri izvo zvandaitya kweupenyu hwangu hwose.
Ndakabayiwa mwoyo nokushandisa Bhaibheri kwaiitwa neZvapupu zvaJehovha muupenyu hwavo. Vanoita zvinoenderana nezvavanodzidzisa. Ndakanga ndiri munhu akaoma musoro, asi pasinei nokuti zvii zvandaitaura kana kuita, Zvapupu zvaindida uye zvaindiremekedza.
Dambudziko rangu guru nderokuzviona ndisingakoshi. Ndaizvitarisira pasi, uye ndakaramba ndiine mafungiro iwayo kunyange ndatobhabhatidzwa semumwe weZvapupu zvaJehovha. Jehovha ndaimuda, asi mwoyo wangu waindiudza kuti iye haangambofi akandida.
Mafungiro angu akazochinja patova nemakore 15 ndabhabhatidzwa. Pane imwe hurukuro yakapiwa paImba yoUmambo yeZvapupu zvaJehovha, mukurukuri wacho akaverenga Jakobho 1:23, 24. Rugwaro urwu runofananidza Shoko raMwari negirazi ratinogona kushandisa kuti tizvione semaonerwo atinoitwa naJehovha. Ndakatanga kuzvibvunza kana maonero andaizviita angave akasiyana neandaiitwa naJehovha. Pakutanga zvakandiremera kugamuchira pfungwa iyi. Ndakanga ndichiri kuzviona sendakaderera zvokusakwanisa kudiwa naJehovha.
Papera mazuva mashoma, ndakaverenga rugwaro rwakazochinja upenyu hwangu. Rugwaro urwu ndiIsaya 1:18, Jehovha paanoti: “Chiuyai zvino, tiruramise zvinhu. . . . Kunyange zvivi zvenyu zvikava somucheka wakati piriviri, zvichacheneswa sechando.” Zvakaita sokuti Jehovha akanga ari kutaura neni achiti: “Vicky mwanangu, huya tigadzirise zvinhu. Ndinokuziva, ndinoziva zvivi zvako, ndinoziva mwoyo wako, uye ndinokuda.”
Usiku hwacho handina kumborara. Ndakanga ndichiri kufunga kuti Jehovha haandidi, asi ndakatanga kufunga nezvechibayiro chaJesu chorudzikinuro. Ndakabva ndapengenuka ndokuona kuti Jehovha akanga andiitira mwoyo murefu kwenguva yakareba kwazvo, achindiratidza nenzira dzakawanda kuti aindida chaizvo. Asi ini ndaiita sendaimuti: “Rudo rwenyu haruna kukura zvokusvika pandiri. Chibayiro choMwanakomana wenyu hachikwanisi kufukidza zvivi zvangu.” Zvaiita sokuti ndakanga ndiri kudzorera chibayiro chacho kuna Jehovha. Asi ndakazopedzisira ndafungisisa chipo ichi chorudzikinuro, ndikatanga kuona kuti ndaidiwa naJehovha.
Ndava kunzwawo kuti ndava munhu uye hana yangu haichanditongesi. Semhuri tava kufara, uye ndiri kufara kuti ndinogona kubatsirawo vamwe nokuvaudza zvakaitika kwandiri. Ukama hwangu naJehovha huri kungoramba huchisimba zuva rimwe nerimwe.
“Uku ndiko kupindurwa kwakaitwa munyengetero wangu.”​—SERGEY BOTANKIN
NHOROONDO YOUPENYU: AIDA MUSAMBO WEHEAVY METAL ZVOKUTOPENGA
Ndakaberekerwa kuVotkinsk, nzvimbo yakaberekerwa mumwe muimbi aiva nemukurumbira muRussia ainzi Pyotr Ilich Tchaikovsky. Mumhuri medu taiva varombo. Baba vangu vaiva nounhu hwakazonaka, asi vaiva chidhakwa, saka pamba taigara takangosungika.
Kuchikoro ndakanga ndisingagoni, uye makore zvaaipindana, ndakatanga kuzvitarisira pasi. Ndakanga ndisingachadi zvokutaudzana nevanhu uye hapana wandaivimba naye. Kuenda kuchikoro kwaindishungurudza zvikuru. Somuenzaniso, pandainzi nditaure nezveimwe nyaya vamwe vakateerera, kazhinji ndaitadza kutsanangura pfungwa dziri nyore dzandaigona kutsanangura kana pasina vanhu. Rimwe gore pandakanga ndiri kusekondari, ripoti rangu rakanyorwa kuti: “Haakwanisi kutaura zvaanofunga, anopererwa nemashoko.” Mashoko aya akandiodza mwoyo zvokundiodza mwoyo zviya, zvokuti ndakatowedzera kuzviona sendisingabatsiri. Ndakatanga kufunga kuti chii chaizvo chandaimboraramira.
Ndiri mumakore okuyaruka, ndakatanga kunwa doro. Pakutanga ndaiti ndikanwa, zvinhu zvaindifambira. Asi pandaidhakwa, hana yangu yainditongesa. Ndakanga ndisingaoni kwakananga upenyu hwangu. Kuora mwoyo kwangu kwakawedzera zvokuti dzimwe nguva ndaipedza mazuva akawanda ndakazvivharira mumba. Ndakatanga kufunga zvokuzviuraya.
Pandakasvitsa makore 20, kushushikana kuya kwakamboti perei. Ndakatanga kufarira musambo weheavy-metal. Ndaiti ndikanzwa musambo uyu ropa rangu raimhanya-mhanya zvokuti ndakapedzisira ndatsvaka vaiufarirawo. Ndakanga ndisingachageri bvudzi, ndakaboorwa nzeve uye ndakanga ndava kupfeka zvipfeko zvakafanana nezvevaimbi vandaiyemura. Nokufamba kwenguva ndakanga ndisisina basa nokuti zvandaiita zvaigona sei kukanganisa vamwe uye ndaida zvokurwa, ndichingogara ndichinetsana nevemumhuri medu.
Ndaifunga kuti kuteerera musambo weheavy-metal kwaizoita kuti ndifare, asi pane kudaro wakatoita kuti ndisafara. Unhu hwangu hwakanga hwachinja. Uyewo pandakazoziva zvinhu zvakaipa zvaiitwa nevaimbi vandaiyemura, ndakaora mwoyo chaizvo.
Pfungwa yokuda kuzviuraya iya yakadzoka zvekare, yasimba chaizvo. Kufunga kuti amai vangu vaizonzwa sei kana ndazviuraya ndiko kwakaita kuti ndichirega kuzviuraya. Vaindida chaizvo uye vane zvizhinji zvavakanga vandiitira. Ndakanga ndava parumananzombe. Zvokurarama ndakanga ndisingachadi, asiwo zvokuzviuraya zvakanga zvisingaiti.
Kuti ndisaramba ndichifunga nezvezvinhu izvi ndakatanga kuverenga mabhuku ainakidza emutauro wekuRussia. Imwe nyaya yandakaverenga yaitaura nezvemumwe murume aiita zvechechi. Ndakabva ndava nechido chakasimba chokunamata Mwari uye kubatsirawo vamwe vanhu. Ndakatanga kunyengetera kuna Mwari ndichimuudza zvaiva kutsi kwemwoyo. Izvi ndakanga ndisati ndambozviita muupenyu hwangu. Ndakakumbira Mwari kuti andiudze zvandingaita kuti ndirarame upenyu hune chinangwa. Pandainyengetera ndakanzwa sokuti pane mutoro wandabvisirwa. Chimwe chakanyanya kundishamisa ndechokuti papera maawa maviri ndanyengetera, mumwe mukadzi aiva mumwe weZvapupu zvaJehovha akagogodza pasuo rangu achibva ataura kuti aida kudzidza neni Bhaibheri. Ndakaona kuti uku ndiko kupindurwa kwakaitwa munyengetero wangu. Kubva musi uyu ndakatanga kufara.
Ndakarasa zvinhu zvose zvandaiva nazvo zvemusambo weheavy-metal asi kuzviita kwakanga kwakaoma. Kunyange hangu ndakarasa zvinhu izvi mumhanzi uyu wakatora nguva refu uchiri mupfungwa dzangu. Pose pandaipfuura nepairidzwa musambo uyu, zvaindirangaridza mararamiro andaimboita. Ndakarega kupfuura nepanzvimbo idzi kuitira kuti ndisavhiringidza zvinhu zvakanaka zvandakanga ndava kufunga. Pose pandainzwa ndichida kufunga zvandaimboita ndainyengetera nomwoyo wose. Izvozvo zvakandibatsira kuti ndive ‘norugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose.’​—VaFiripi 4:7.
Pandaidzidza Bhaibheri ndakaona kuti vaKristu vanofanira kuudzawo vamwe zvavanotenda. (Mateu 28:19, 20) Mumwoyo mangu ndaizviudza kuti handimbofi ndakazvikwanisa. Asiwo zvinhu zvitsva zvandaidzidza zvakaita kuti ndifare chaizvo uye ndinyatsogadzikana mupfungwa. Ndakaona kuti vamwe vaidawo kudzidza chokwadi ichi. Pasinei nokutya kwandaiita, ndakatanga kuudza vamwe zvinhu zvandaidzidza. Ndakashamisika chaizvo kuona kuti kuudza vanhu zviri muBhaibheri kwakaita kuti ndiwedzere kuva noushingi. Kwakaitawo kuti zvinhu zvitsva zvandakanga ndava kutenda zvinyatsodzika midzi mumwoyo mangu.
Iye zvino ndakaroora uye ndiri kufara, uye ndiri kunakidzwa nokubatsira vanhu vanoverengeka kudzidza Bhaibheri, kusanganisira hanzvadzi yangu naamai vangu. Kushumira Mwari uye kubatsira vamwe kudzidza nezvake kwakaita kuti upenyu hwangu huve nechinangwa.